Wadooyinka barafka xiran, qandaraasle hoosaad ayaa weli ku jira fasalka fasalka dagaalka ka dhanka ah barafka | RayHaber | raillynews
HometareenkaWaddooyinka barafka la daboolay, qandaraaslayaashu waxay ku jireen fasalka barafka
05 / 01 / 2015 tareenka, GUUD, WADADA, Headline
Barafka ayaa xiray wadooyinka, qandaraaslaha qandaraaslaha ayaa weli ku jira darajada dagaalka ka dhanka ah barafka: barafka ugu horeeya sanadka sanadka wadooyinku way xirnaayeen gobollo badan. Hawlaha wadooyinka ayaa dib loo dhigay. Wadayaasha iyo rakaabka ayaa ku xanniban barafka saacado. Sababta ka dambaysa waxaas oo dhami waxay ahayd in shaqada furitaanka la siiyay qandaraas-bixiyeyaasha.
Istanbul, Izmit, Tekirdag, Kirklareli gobolada waxaa loo xiray baraf awgiis, rakaabku waxay ku xannibanyihiin barafka ku dhow saacadaha 40. Sababta '' dhibaatadan 'ında ee barafka ugu horeeya ee sanadka waxaa sabab u ah nidaamka qandaraas hoosaadka.
Dib-u-dhaca daah-furista waddooyinka oo ay barafku xirnaayeen waxaa sabab u ahaa howl-wadeennada qandaraas-qaatayaasha qaata hindisooyinka si loo bixiyo adeegyadan. Baaqa ka soo baxay Agaasinka Guud ee Wadooyinka (KGM), dambiga waxaa loogu tuuray darawalada ereyada soo socda: shilalka baabuurta ee Bursa ayaa si xun u saameeyay isku socodka waddooyinkayaga. ”
KGM kaliya maaheyn eedeeyaha darawalnimada. Öpol Polat, oo ah milkiilaha Akpolat Harfiyat Construction Mining iyo Contracting Limited Company, AKP Gudoomiye Kuxigeenka Arimaha Bulshada, ayaa sheegtay in dhibanaha uu ahaa darawalada.
Xaqiiqda ah in wadooyinka xiran ay ku jiraan shirkado qandaraas hoosaadyo, in wadooyinka la siiyo shirkadaha qandaraaska, in qiimaha hindisada uu sarreeyo iyo in mid ka mid ah hindise-bixiyeyaasha uu yahay maamulaha AKP wuxuu tilmaamayaa cidda laga yaabo inay tahay milkiileyaasha qandaraasleyda kale.
Wax faa iido ah kumalaha qandaraasluhu
Marka uu qandaraas-hoosaadku bilaabo in laga hirgaliyo waddooyinka waaweyn, isla dhul isku mid ayaa la arkaa sannad kasta. Sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen Yol İş sanadkii la soo dhaafay, mashiinada qandaraas hoosaadka ayaa ah kuwo aan ku filneyn oo shaqaaluhuna waa khibrad la'aan. Mashiinada dhismaha ee laga kireeyey oo laga ordo wadooyinka waa weyn ayaa la soo celiyaa dhamaadka xilligan oo waxaa loogu haray dayac la'aan.
Şeban Çekil, Xoghaynta Hay'adda 1 ee Ururka Yol-İş Union, oo la hadlaysa Evrensel wuxuu sheegay in shaqada wadadu aysan fulin karin nidaamka qandaraasleyda. Çekil wuxuu xusey in howlo dowladeed la sameeyay iyo in KGM uu masuul ka ahaa amaanka rakaabka. Haddii qandaraasluhu caddeeyo oo keliya inuu ka fikiro naagtaada, Çekil, rakaabka iyo shaqaaluhuba waxay sheegeen inuusan dan ka lahayn.
Kun gawaadhi ah oo loo yaqaan '11 kun' ayaa looga haray inay qudhmaan
Şaban Çekil, Agaasimaha Guud ee Wadooyinka Waaweyn ee ka dhex jira 11 kun oo gawaari ayaa u haray inuu qudhmiyo, inta badan gawaarida ay adeegsadaan qandaraasleyda, ayuu xusay. Shirkadda Ekil waxay maamushay nooca mindiyo, maxay baaldi tahay, ”ayuu ku celceliyay isagoo yiri Çekil, Moodhka 1998 iyo gawaarida la'aanteed qalabkii loo baahnaa, ayuu yidhi. Sanadkii la soo dhaafay, qandaraaslaha qandaraaslaha ee gawaarida ee Kayseri, wareejinta ka bixitaanka taraafikada, "Sida loogula shaqeeyo gawaaridaan inay wadada sameeyaan," ayuu weydiyay.
Shaqaalaha qandaraasyada ee Adiyaman way xireen waddada
Bay Bridge waa in lagu jiidaa Febraayo
Sheegashada 21 "Dhallinyaro Dheer" Waxay la xiriiraan Shilku wuxuu lumiyay noloshiisa